Inkulumo kaHunt yimbi, izoyihlakaza iChiefs: Junior Khanye - Impempe
Inkulumo kaHunt yimbi, izoyihlakaza iChiefs: Junior Khanye
March 25, 2021 Impempe.com
UJunior Khanye akayithandanga inkulumo yomqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt yokuthi ubengenabo abadlali ebhentshini ngesikhathi beshaya i-Orlando Pirates ngempelasonto edlule.
Usola lo mqeqeshi ngokuzazisa nokuzibona emkhulu ngendlela yokuthi ubabukela phansi abadlali ababesebhentshini.
“Angazi uthandwani noma yini le ebonwa kuHunt ngoba lo muntu uyalibulala ibhola lakuleli,” kusho uKhanye.
“Izinkulumo ezinjena ziyalihlukanisa iqembu ngoba khona abazozibona bengelutho, abanye bazibone bengcono.
“Usho ukuthini uma ethi ubengenabo abadlali? Kanti labantu abebesebhentshini bayini? Ababona abadlali? Abanazo izinkontileka neChiefs?
“Engiqonde ukukusho wukuthi laba badlali athi akasababoni yena yibo abacishe wawina iligi ngesizini edlule, yabaphunyula ngemizuzu yokugcina.
“Sebejike nini ke baba wumbhedo? Mina ngizokutshela nje iqiniso ngaphandle kokusaba uHunt ngeke ayenzele lutho uHunt, kunalokho uzoyibulala ayiqede nya,” kusho uKhanye owake wadlala kuyo iChiefs.
Uthe njengoba yena ehlale ephumela obala ngokungasiboni isimanga kuHunt, uyazi lo mqeqeshi kungenzeka akasamthandi futhi uhalela nokumngximfiza ngesibhakela.
“Ngiyazi useyangizonda futhi uma singahlangana engahalela nokungishaya, kodwa mina angilwi naye, ngizikhiphela amaqiniso enjengoba enjalo nje.”
Uthe ubufakazi nokuthi iChiefs isagidagida ndawonye wukuthi akukho mdlali oseqenjini lesizwe, iBafana Bafana ngaphandle kuka-Itumeleng Khune. Uthe uHubt ukhukhunyezwe wukushaya iPirates ngoqhwasha wabe esedelela abadlali.
“Kube yinhlanhla nje leya wini. Akukho simanga eyasenza iChiefs, empeleni nje yenzelelwa yiPirates. Negoli eyalishaya alilakhanga kodwa lavela ngokubhacaza kwabePirates.
“Anagikholwa wukuthi u(Samir) Nurkovic uzophinde alishaye igoli elinjeyana ngoba ube nenhlanhla nje yaleli.
“Kumanje akukho mdlali weChiefs okwiBafana, kungani? UKhune isihlabani siyamazi thina, ukuthi nje udlaliswa nabantu abangakwazi ukubamba ibhola, abavele batatazele uma ebaphasela ezama ukuyiqala emuva iminyakazo yokuhlasela,” kulanda uKhanye.
Previous Previous post: BENZANI MANJE: SANDILE NDLOVU – Ugcizelela inhlonipho nesikole kwinkulisa yakhe
Next Next post: Afiphele amathemba eBafana nge-AFCON ibanjwa yiGhana